Fahasalamana: ny fanarenana dia miverina amin'ny 'faniriana' ara-dalàna | Reward Foundation
Home fahasalamana Recovery
Ny ifantohan'ny fiankinan-doha dia mandresy lahatra kokoa noho ny lafiny hafa rehetra amin'ny fiankinan-doha. Marina izany amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia toy ny amin'ny fiankinan-doha hafa. Miverina ireo fanovana ireo ny fanarenana. Miala tsimoramora ny fiankinan-doha amin'ny fomba ahoana ny 'faniriana' ara-dalàna.
Raha mila dingana azo ampiharina bebe kokoa amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fisorohana dia jereo ny maodely 3-dingana The Reward Foundation amin'ny Quitting Porn:
Ny maodely fanarenana dingana telo an'ny Reward Foundation
Hetsika izay mampiroborobo ny famokarana oxytocine ao amin'ny ati-doha (fatorana, fisakaizana, asa an-tsitrapo, fiarahan'ny biby, fanatanjahan-tena, fotoana voajanahary, sakafo ara-pahasalamana ara-dalàna, torimaso tsy tapaka, fampisehoana zavakanto toy ny dihy, fihirana, fampisehoana, hatsikana, hetsika maneho fihetseham-po toy ny mandoko, manao sary, manoratra sns ... dia manampy amin'ny fampihenana ny filana izay mariky ny dopamine ambany. Ny Oxytocine koa dia manampy amin'ny fampihenana ny kortisol ao amin'ny rafitra ny neurochemical mifandraika amin'ny fahaketrahana sy ny fihenjanana.
Mety ho toa ny 'zava-mahadomelina' na fitondran-tena safidintsika ihany no afaka mampitony ny fahalainana sy ny fahasosorana. Ny fifantohana tanteraka amin'ny saina bebe kokoa momba izany sy ny fahatezerana raha esorina izany dia hitranga mandra-pahatsika handalo ny dingan'ny fanesorana ilay 'vera avy amin'ny ratra' ary hamela ny atidohantsika hiova indray amin'ny valisoa voajanahary. Misy miantso azy io ho 'rebooting' ny ati-doha.
Fitiavana na 'fatorana mpivady', mila fifandanjana salama amin'ny dopamine sy oxytocine isika. Izany no antony mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny karazana, izay miavaka amin'ny fikatsahana hevitra iray amin'ny zava-mahadomelina safidin'ny olona iray, no tena manakana ny fifandraisana feno fitiavana. Ny mpidoroka na ireo izay manana olana amin'ny fampiasana olana dia manjary ketraka, tsy afaka manome fitiavana, mangoraka na mahatsapa ny filan'ny hafa. Mila manampy azy ireo sy ny tenantsika isika, hahita indray ny lanjan'ny fiainana amin'ny fomba feno amin'ny fomba mahasalama sy mamorona.
<< Fahamendrehana amin'ny fitondran-tena